Indlu ye-Farm chalet - I-Airbnb
Indlu ye-Farm chalet
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-M.H.D
**I-Farm Chalet; Indawo enenhlanhla ekude nomsindo wedolobha, futhi igcwele umoya-mpilo ophuma endaweni ezungeze i-chalet, ephakathi kwamapulazi aluhlaza. Futhi ukuze ukwazi ukujabulela ubumfihlo nomndeni wakho, nakanjani uzokuthola lapha. Izivakashi ziphinde zijabulele i-Wi-Fi yamahhala kanye nokukhethwa okukhulu kwamashaneli e-TV abethelwe namamuvi.
Kukhona ichibi langasese phambi kwe-chalet ukuze ujabulele isipiliyoni esiyingqayizivele sokubhukuda, ikakhulukazi ehlobo, futhi kukhona ikhishi lokulungiselela. Kukhona nezikhala ezingaphandle zokuhlala endaweni evulekile. Kukhona futhi i-balcony esitezi sokuqala ebheke echibini langaphandle.
1- Inani lizovikelwa nge-Airbnb ngokubhukha, okuyinani elibuyiselwayo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho monakalo noma ukushoda kokuqukethwe endlini ye-chalet.
2- Uphahla lwangaphakathi lufushane futhi lungamamitha angu-2.2 ukuphakama, ngakho-ke kufanele kuqashelwe ukuthi uqaphele futhi uqaphele lapho usebenzisa izitebhisi ukuya esitezi sokuqala futhi wehle futhi.
3- Ukujula okuphezulu kwechibi kungamamitha angu-1.5, futhi umsingathi akanasibopho sanoma yikuphi ukusetshenziswa okungalungile okungase kubangele noma yimuphi umonakalo kubavakashi.
4- Kungenzeka ukucela kumphathi wepulazi eminye yemikhiqizo ephilayo yepulazi (uju, izinsuku, inkukhu, amaqanda, inyama yogwaja, nemifino) Kungenzeka futhi ukucela ukuhlinzekwa kwezinkuni eziko esitofini sangaphandle izinsuku zasebusika. Imikhiqizo namasevisi engeziwe ngamanani aphusile okheshi
5- Izivakashi zijabulela ukuzulazula ngaphakathi kwe-chalet kuphela hhayi ukuzulazula epulazini. Futhi, inani eliphakeme lezivakashi ngabantu abangu-4
6- Kufanele uhlale uzolile, njengendawo kanye nokusetshenziswa kwezinsizakalo, njengoba i-chalet isetshenziswa kahle.
7- Ungasishisi isitofu ngaphandle kokuthi ucele umninikhaya ukuze acabangele izinqubo zokuphepha, futhi ungakhethi izimbali noma uphazamise izitshalo esizeni. Futhi, sicela ungazilimazi izinyoni ezihlala ngokwemvelo indawo.
8- Ungagxumi echibini noma uphonsa noma yini emanzini echibi.
Isakhiwo sakhiwe futhi sasetshenziswa inkampani ye-MHD yokusingatha. Ungakhuluma naye ukuze ukhiqize ezinye izimo noma ezifana nesakhiwo se-chalet. Isakhiwo sesakhiwo sakhiwe ngezinto ezivuselelwe kabusha, eziklanywe umakhi / u-Reda Ismail, kanye nengaphakathi. umklamo wadalwa umklami / uZina Maalouf. Inezitezi ezi-2, phansi kukhona igumbi lokuphumula, ikhishi, itafula lokudlela kanye negumbi lokugezela. Futhi isitezi sokuqala sinamagumbi okulala ama-2, i-balcony, negumbi lokugezela. Indawo yangaphakathi yesakhiwo icishe ibe ngamamitha-skwele angama-80.
Yonke imiyalelo yokusebenzisa i-chalet izothunyelwa, futhi umphathi uzotholakala ukuze axhumane naye ukuze acele ukusekelwa uma kudingeka ngendlela yokuxhumana etholakalayo.